It is me. Ko Niknayman.: အောက်တိုဘာလ (၆) ရက်နေ့ မှ (၁၅) ရက်နေ့ အတွင်း မြန်မာပြည်အရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ လှုပ်ရှားမှုများ။
ဂျာမဏီ၊ အမေရိက (ဟာဝိုင်အီ)၊ အင်္ဂလန် (လန်ဒန်)၊ ဘင်္ဂလာဒေရှ့် ၊ စင်ကာပူ၊ သြစတြေလျ (မဲလ်ဘန်း)၊ နယူးဇီလန် (Boycott Bejing Olympics 2008)။ http://picasaweb.google.com/niknayman/PhotosFromOctober06To152007
Posted by Ko Niknayman at 11:08 AM